» नेपालमा कोरोेना हेर्ने डाक्टर २८ मात्रै
२९ चैत्र २०७६, शनिबार ०७:२७
काठमाडौं : कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण बढेको अवस्थामा सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) मा बिरामीलाई राखेर गरिने उपचारका लागि कति चिकित्सक र नर्र्स खटाउनुपर्ला ? अनुमान गर्नुहोस्। संक्रमितलाई अस्पतालमा राखेर उपचार गराउनुपर्ने अवस्थामा अहिलेसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले २८ जना चिकित्सक र ३० जना नर्सलाई मात्र तालिम दिएको छ।
सरकारले कोरोना भाइरस परीक्षण दायरा बढाए पनि तालिमप्राप्त दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको पर्याप्त व्यवस्था गर्न सकेको छैन। कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले हाल सेवा बाहिर रहनुभएका र सेवा निवृत्त चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वैच्छिक रूपमा आबद्ध हुन आह्वान गरेको छ।
सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका मेडिकल अधिकृत, वरिष्ठ चिकित्सकका साथै एमडी ÷एमएस तथा एमबीबीएस अध्ययनरतलाई परिचालन गर्न गत साता मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरिएको थियो। ‘छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत चिकित्सक परिचालन गर्न पनि निर्णय भएको छ। यसले जनशक्ति व्यवस्थापनमा ठूलो मद्दत पुग्ने विश्वास लिएका छौं’, उनले भने।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चिकित्सा शास्त्रअन्तर्गत स्नातकोत्तर तहको दोस्रो र तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत चिकित्सक परिचालन गरिने भएको हो।
अहिले मुलुकका विभिन्न स्थानमा राखिएका क्वारेन्टाइनमा ८ हजार ६ सय ६१ जना व्यक्ति बसिरहेका छन्। त्यस्तै, आइसोलेसनमा १ सय २५ जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। जसमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा १५ जना र बाहिर १ सय १० जना छन्। अहिलेसम्म कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या ९ छ। संक्रमितमध्ये धनगढीस्थित सेती अञ्चल अस्पतालमा चार जना उपचाररत छन्। काठमाडौंस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल र बाग्लुङ धौलागिरि प्रादेशिक अस्पतालमा दुई जना छन्। उपचाररत सबैको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. देवकोटाले जानकारी दिए। कोरोना भाइरस संक्रमणले दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको एक सातायता नयाँ संक्रमित भेटिएका छैनन्।
तलब कट्टा नगरिने
कोरोना भाइरसको नियन्त्रण, निदान र उपचारमा खटिएका चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीको तलब कट्टी नगरिने भएको छ। ११ चैतको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार विभिन्न तहका कर्मचारीले तीनदेखि सात दिनसम्मको तलब कट्टी गरेर उपचार कोषमा राख्ने निर्णय भएको थियो। संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारले कोभिड १९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष खडा गरेका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. देवकोटाले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब कट्टी गर्ने निर्देशन जारी नभएको बताए। उनले भने, ‘हालसम्म तलब कट्टी पनि गरिएको छैन। तलब कट्टी गर्ने निर्देशन जारी पनि भएको छैन।’ चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीले उच्च मनोबलसाथ फिल्डमा खटिन आह्वान गरिएको समेत उनले बताए। आजको अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा खवर छ ।